तीन प्रतिवेदन पारित गर्दै सकियो एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक - Jyotinews
ज्योतिन्यूज २०७८ असोज १० गते १८:५९
काठामडौँ– नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको छ । शुक्रबार सुरु भएको बैठक आइतबार तीनवटा प्रतिवेदन पारित गर्दै सकिएको हो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिब ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिब विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन मस्यौदा बैठकले सुझाबसहित पारित गरेको प्रचार विभाग प्रमुख योगश भट्टराईले जानकारी दिए ।
तीनवटै प्रतिवेदनमाथि १० वटा समूह बनाएर शनिबार छलफल भएको थियो । सो छलफलमा आएका सुझाब तथा प्रश्नबारे अध्यक्ष ओलीलगायत प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता नेताले जवाफ दिएका थिए । जवाफ दिनेक्रममा अध्यक्ष ओलीले संसद विघटन ठिक रहेको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।
उता ७० वर्षे उमेर हद कायम राखिने जवाफ उपमहासचिब पौडेलले दिएका थिए । उनले विधान महाधिवेशनले निर्णय गरेमात्र सो व्यवस्था परिवर्तन हुने अन्यथा ७० वर्ष उमेर पुगेकाले कार्यकारी पद लिन नपाइने व्यवस्था कायम रहने जानकारी दिएका थिए ।
प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईका अनुसार विधान महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरुबारे यसअघिको निर्णयमा केही सुधार गरिएको जानकारी दिए । यसअघि विभागबाट १५ जना प्रतिनिधिले भाग लिने भनिएकोमा अब ५ जनालेमात्र भाग लिन पाउने भएका छन् । करिब ५ हजार प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा भाग लिने उनले बताए ।
बैठकमा अर्का महासचिब घनश्याम भुसालले भने फरकमत राखेका छन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै भुसालले आफूले केही फरकमत राखेको बताए । उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा फरकमत राखेका हुन् । उनले अहिले समाजमा परिवर्तन भइसकेको भन्दै त्यसलाई समाजवादसम्म लैजाने कार्यक्रमबारे यसअघिकै अडान राखेको बताए ।
केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेका ३ वटै प्रतिवेदनलाई यही असोज १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने छ।
देउवा अर्ली इलेक्सनमा सकारात्मक हुन् ?
एमाले १०औँ महाधिवेशन : पाँच लाख सहभागी, चन्दा नउठाउने, ठाँउ खोजिदैं
एमालेले माधव नेपालको पार्टीलाई मान्यता दिइसक्योः आनन्द पोखरेल
एमसीसीमा नेपालकै कानुन लागू, जस्ताको त्यस्तै पारित हुन्छः प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्रीले आज कैलाली र बर्दियाका प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्ने
कस्तो छ आज सुनचाँदीको बजार मूल्य ?
सांग्रिला बैंकको बोनस सेयरपछिको मूल्य समायोजन
भक्तपुरमाथि बाँसगढीको १२ गोल
जुवाखालबाट पक्राउ परेका वडाअध्यक्ष छुटे